किसान बजार - समाचार र घटनाक्रम | लिभिंग सिटी फार्महरू – Living City Farms
लिभिङ सिटी फार्महरू सधैं सिक्न र जडान गर्न अवसरहरू खोज्दै छन्। किसान बजारहरू र पप-अप उत्पादनहरू देखि नयाँ खेती प्रविधिहरू र थप, हामी तपाईंलाई हाम्रो यात्रामा साझेदारी गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
शहरी खेती उत्तरपूर्वी ओहायोमा बढ्छ तर चुनौतीहरूको सामना गर्दछ
WKSU, सेप्टेम्बर 17, 2021
TALLMADGE, ओहायो - सहरी खेती को विचार एक सीधा छ। सहरी सेटिंगमा खाली, प्रयोग नगरिएको जग्गा लिनुहोस् र यसलाई समुदायलाई फिर्ता दिने चीजमा रूपान्तरण गर्नुहोस्। र उत्तरपूर्वी ओहायोमा सहरी खेती बढ्दै जाँदा, किसानहरूले अझै धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। थप पढ्नुहोस्...
साझेदारी, स्थानीय जडानहरूले लिभिङ सिटी फार्महरू बढ्दै जान्छन्
फार्म र डेयरी, जुन २३, २०२१
TALLMADGE, ओहायो - लिभिङ सिटी फार्महरू सुश्री जुलीज किचेन, एक शाकाहारी रेस्टुरेन्ट, अक्रोनको लागि शहरी फार्मको रूपमा सुरु भयो। त्यो भन्दा ठुलो हुदैछ, अहिले । तर यो अझै पनि रेस्टुरेन्ट र समुदाय संग जडान मा निर्भर छ। फार्म र रेस्टुरेन्ट दुबै गुड प्लेस होल्डिंग्सको स्वामित्वमा छ, एक कम्पनी जसले समुदायमा "राम्रो ठाउँहरू" निर्माण गर्न खोज्छ, फार्म प्रबन्धक स्टीभ लार्सनले भने। फार्मले लेखा र मार्केटिङ समर्थन जस्ता केन्द्रीकृत र साझा व्यापार स्रोतहरू सहित संगठनबाट कोष प्राप्त गर्दछ। थप पढ्नुहोस्...
स्थानीय पुस्तकालय प्रणालीले पुस्तकभन्दा बढी ऋण दिन्छ
WKYC.com, मार्च २६, २०२१
एक्रोन, ओहायो - सौर्य दिन लम्बिँदै जाँदा, मालीहरूले ठूला र साना दुवै ठाउँमा माटो तयार पार्छन्। कोही भन्छन्, "त्यसो भए के?" धेरैले जवाफ दिन्छन्, "बीउ छर्न", तर कहाँ खोज्ने? ठिक छ, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो स्थानीय पुस्तकालयमा निःशुल्क फेला पार्न सक्नुहुन्छ। Steve Larson सँग हुनुहुन्छ लिभिंग सिटी फार्महरू। उसले आफ्नो तरकारी ओछ्यान तयार गर्दैछ र छिट्टै रोप्ने छ। थप पढ्नुहोस्...
लिभिङ सिटी फार्मको स्टीव लार्सन
द नो-टिल मार्केट गार्डन पोडकास्ट विथ जेसी फ्रस्ट, मार्च २२, २०२१
किसान जेसीले अक्रोन, ओहायोको लिभिङ सिटी फार्म्सका स्टीभ लार्सनसँग शहरी कृषि विज्ञान, नगद बालीको सफल प्रतिक्रिया, कम्पोस्ट दुविधा, केही लोकप्रिय कृषिविद्हरूको निर्देशन पछ्याउने नतिजाहरूमा नो-टिल कभर फसलहरूको शक्तिको बारेमा कुरा गरे।, र हाम्रो पारिस्थितिक विकास उपकरण बक्समा उपकरणहरूको फराकिलो दायरा समावेश गर्न हाम्रो विचारधाराहरूलाई टेम्पर गर्दै। एक धेरै आधारभूत कुराकानी। यहाँ सुन्नुहोस्...
समिट लेक छिमेकी किसानको बजार
380 W Crosier St, Akron, OH 44311
हरेक मंगलबार: ४-७ PM (जुन ८ - सेप्टेम्बर २८, २०२१)
उत्पादन खरिद गर्न वा नमस्ते भन्नको लागि रोक्नुहोस्!
हाम्रो फसल बढ्दै जाँदा हामी घटनाहरू थप्नेछौं। चाँडै फेरि जाँच गर्नुहोस्!